Iindlela ezihlanu zedijithali eziShukumisayo eYurophu | Martech Zone
Iindlela ezihlanu zedijithali eziShukumisayo eYurophu
NgoLwesine, Meyi 23, 2013 Douglas Karr
Idatha enkulu, amajelo amaninzi, imithombo yeendaba eshukumayo kunye nezoluntu konke kuchaphazela indlela yokuziphatha yokuthenga kwi-Intanethi. Ngelixa le infographic ijolise eYurophu, i Umhlaba wonke awufani kakhulu. Idatha enkulu inceda ababoneleli be-ecommerce baqikelele indlela yokuziphatha yokuthenga kunye nokunceda ukubonisa imveliso kwimveliso kumajelo onke-ukwandisa amazinga okuguqula kunye nokuthengisa abathengi.
Uvavanyo lweMcKinsey iConsumer olukhanyayo Iindlela ezi-5 eziphambili zokusetyenziswa kwedijithali kurhwebo, i-mobile, i-multichannel, imidiya yoluntu kunye nedatha enkulu.
Inxalenye enzima, ewe, ayisiyiyo nje indlela iinkampani ezisebenzisa ngayo idatha enkulu kunye nendlela ezithengisa ngayo kumajelo, ibala ifuthe lesitishi ngasinye sentengiso kuthengiso lulonke. Iinkampani ezinkulu zisebenzisa ukuqikelela kubahlalutyi Ukuqokelela umthamo wedatha kwaye ubavumele ukuba baqonde ukuba loluphi ukonyuka okanye ukwehla komsebenzi wejelo elinye kuyo yonke indawo. Iinkampani ezincinci zisalele ngothintelo lokuqala, iindlela zokuchukumisa okokugqibela ezinokungabonisi ukuqonda kunye nokuchaneka kweendlela ezithatha indlela yokuziphatha yabathengi ngoku.
tags: idatha enkuluukusetyenziswa kwedijithaliiYurophuMcKinseyIMcKinsey kunye neNkampanizorhweboijelo elininziukuthengisa amajelo amaninziezentengiso
Ukuqala kokuChukumisa, ukuChukumisa kokuGqibela, ukuChukumisa okuninzi
Jun 2, 2013 ngo-8:38 AM
I-inforgraphic intle kakhulu, ndivuma ngokupheleleyo ukuba ngokwenza utyalo-mali ngakumbi kwinkqubo yokuthenga kwi-Intanethi kwaye ufake idatha ethe kratya kwiiwebhusayithi, abathengi kunye neentengiso ziya kunyuka kakhulu.